Taa, m na -achọ infographic na webụsaịtị Adobe na nsonaazụ ya abụghị ihe m na -achọ. Kama ịga na saịtị wee chọgharịa n'ime, ọ fọrọ nke nta ka m jiri ụzọ mkpirisi Google mee saịtị ọchụchọ. Nke a na -abịa nke ukwuu - ma m na -achọ nhota, snippet koodu, ma ọ bụ ụdị faịlụ akọwapụtara.
N'okwu a, nchọta izizi bụ:
Nsonaazụ ahụ na -enye ibe ọ bụla gafee mpaghara subdomains Adobe niile gụnyere okwu ahụ infographic. Nke ahụ wetara puku kwuru puku ibe site na saịtị foto ngwaahịa Adobe, yabụ ọ dị m mkpa iwepu subdomain ahụ na nsonaazụ:
Ewepụrụ m subdomain a kapịrị ọnụ site na iji mwepu banye na subdomain m na -ewepụ. Ugbu a ọ dị m mkpa ịchọ otu ụdị faịlụ… faịlụ png:
Ụzọ mkpirisi ndị a bara ezigbo uru iji chọọ saịtị akọwapụtara…
Otu esi achọ na saịtị Google
saịtị: Nchọgharị n'ime otu saịtị ma ọ bụ ngalaba. -saịtị: ewepu ngalaba ma ọ bụ subdomain
Etu ị ga -esi jiri Google chọọ Platform Social Media
Jiri akara @ ka ịchọọ usoro mgbasa ozi na -elekọta mmadụ (naanị jide n'aka na ị ga -etinye usoro mmekọrịta na njedebe).
Etu ị ga -esi jiri Google chọọ ụdị faịlụ akọwapụtara
ụdị: Achọ maka otu ụdị faịlụ, dị ka pdf, doc, txt, mp3, png, gif. Ị nwere ike wepu na -filetype.
Otu esi achọ na aha Google
gafere: Nchọgharị maka otu mkpụrụokwu n'ime aha webụsaịtị ahụ karịa ibe ahụ dum. Ị nwere ike wepu aha -intitle.
Ndekọ edemede: Nchọgharị maka otu mkpụrụ okwu n'ime aha blọgụ blọgụ. Ị nwere ike wepu ya na -inposttitle.
Allintitle: Chọọ ahịrịokwu niile n'ime aha. Ị nwere ike wepu ya na -allintitle.
Otu esi achọ na URL na Google
niile: Chọọ ahịrịokwu niile n'ime okwu URL. Ị nwere ike wepu ya na -allinurl.
inurl: Chọọ mkpụrụokwu n'ime URL. Ị nwere ike wepu ya na -inurl.
Otu esi achọ na ederede Anchor na Google
allinanchor: Chọọ otu ahịrịokwu niile n'ime ederede arịlịka nke onyonyo. Ị nwere ike wepu ya na -allinanchor.
inanchor: Chọọ okwu n'ime ederede arịlịka nke onyonyo. Ị nwere ike wepu ya na -inanchor.
Ndị na -arụ ọrụ maka iji ederede chọọ Google
Jiri * n'etiti okwu dị ka akara ngosi iji chọpụta njikọta niile.
Jiri onye ọrụ OR n'etiti okwu wee chọọ okwu abụọ.
Jiri onye ọrụ AND n'etiti okwu chọọ okwu niile.
Jiri * dị ka akara ngosi iji chọta okwu nwere mkpụrụedemede ma ọ bụ okwu n'etiti
Jiri ~ tupu okwu gị chọta okwu ndị yiri ya. N'okwu a, okwu dị ka mahadum ga -apụtakwa:
Ewepu okwu na akara mwepu
Chọta otu mkpụrụokwu ma ọ bụ ahịrịokwu kpọmkwem site n'itinye ha n'ahịrịokwu
Chọta mkpụrụokwu niile n'ime otu nsonaazụ. Ị nwere ike wepu ya na -allintext.
Chọta mkpụrụokwu niile n'ime otu nsonaazụ. Ị nwere ike wepu ya na -intext.
Chọta mkpụrụ okwu dị ibe gị nso n'ime ọnụ ọgụgụ okwu a kapịrị ọnụ
Ịnwekwara ike itinye mgbakwunye ndị ọzọ na ọchụchọ iji tinye ma wepu usoro, akpaokwu, ngalaba, wdg. Ị nwekwara ike wepu site na iji akara mwepu na nyocha gị
Azịza ọsọ ọsọ site na ọchụchọ Google
Google na -enyekwa ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ na -enye aka:
Oche nke nọmba, ụbọchị, data, ma ọ bụ ọnụ ahịa iji ..
Ihu igwe: ọchụchọ weather ka ihu ihu igwe na ọnọdụ gị ma ọ bụ tinye aha obodo.
Ọkọwa okwu: -etinye kọwaa n'ihu okwu ọ bụla iji hụ nkọwa ya.
Ngụgụ: Tinye nha mgbakọ na mwepụ dị ka 3 *9123, ma ọ bụ dozie usoro eserese dị mgbagwoju anya gụnyere +, -, *, /, na okwu trigonometry dị ka cos, mmehie, tan, arcsin. Otu ihe dị mma na nchịkọta Google bụ na ị nwere ike iji ọnụọgụ buru ibu… dị ka 3 trillion / nde 180 ma nweta nzaghachi ziri ezi. Ọ dị mfe karịa itinye zeros ndị ahụ na ihe mgbako gị!
pasent: Ị nwekwara ike gbakọọ pasent site na itinye % nke:
Ntughari nke otu: Tinye ntụgharị ọ bụla.
Egwuregwu: Chọọ aha ndị otu gị ka ị hụ nhazi oge, akara egwuregwu na ihe ndị ọzọ
Ọnọdụ ụgbọ elu: Tinye nọmba ụgbọ elu gị zuru oke wee nweta ọkwa ọhụrụ
Ihe nkiri: Chọpụta ihe na -akpọ na mpaghara gị
Eziokwu ngwa ngwa: Chọọ aha onye ama ama, ọnọdụ, ihe nkiri, ma ọ bụ egwu iji chọta ozi metụtara ya
Tags: googlegoogle gbakọọ pasentmgbako googlegoogle ọkọwa okwugoogle ngalaba nchọtagoogle ewepuọnọdụ ụgbọ elu googleihe nkiri googleeziokwu ngwa ngwa googlegoogle Rangesgoogle searchgoogle ngalaba ngalabaụzọ mkpirisi google searchnyocha saịtị googlegoogle egwuregwu nyochagoogle trigonometryntụgharị google unitgoogle search kaadịederede